Sidee Falanqaynta Dhamaadka-dhamaadka U Caawisaa Ganacsiyada | Martech Zone
Sidee Falanqaynta Dhammaad-dhamaadka U Caawisaa Ganacsiyada
Sabti, Agoosto 10, 2019 Axad, Agoosto 11, 2019 Margo Kashuba
Falanqaynta dhamaadka-ilaa-dhamaadka ma aha oo kaliya warbixinno qurux badan iyo muuqaallo muuqaal ah. Awoodda loo maro dariiqa macmiil kasta, laga bilaabo barta ugu horeysa ee la taabto illaa iibsashada caadiga ah, waxay ka caawin kartaa ganacsiyada inay yareeyaan qiimaha kanaallada xayeysiinta ee aan waxtarka lahayn iyo kuwa la qiimeeyay, kordhinta ROI, iyo qiimeynta sida joogitaankooda khadka tooska ah uu u saameynayo iibka qad la'aanta. OWOX BI Falanqeeyayaashu waxay ururiyeen shan daraasadood oo kiis ah oo muujinaya in falanqaynta tayada sare leh ay ka caawiso ganacsiyada inay guuleystaan ​​oo faa'iido helaan.
Adeegsiga Falanqaynta Dhammaadka-Dhamaadka si loo Qiimeeyo Tabarucaadka Khadka Tooska ah
Xaaladda. Shirkad ayaa furtay dukaan internetka ah iyo dhowr dukaanno tafaariiqeed ah. Macaamiisha ayaa alaabada si toos ah uga iibsan kara bogga shirkada ama ka baari karaan khadka tooska ah waxayna imaan karaan dukaan jireed si ay wax uga iibsadaan. Mulkiilaha ayaa isbarbar dhigay dakhliga ka soo gala iibka internetka iyo khadadka wuxuuna ku soo gabagabeeyay in dukaan jireed uu keeno faa iido badan.
Hadafka. Go'aanso inaad ka laabato iibka khadka tooska ah iyo inaad diirada saarto dukaamada jirka.
Xalka dhabta ah. Shirkadda dharka dumarkaDarjeeling Bartay saamaynta ROPO - saamaynta ay ku leedahay joogitaankeeda khadka tooska ah ee iibkeeda qadka. Khubarada Darjeeling waxay ku soo gabagabeeyeen in 40% macaamiisha ay booqdeen goobta ka hor inta aysan ka iibsan dukaan. Sidaa awgeed, la'aantii dukaanka khadka tooska ah, ku dhowaad kalabar iibsiyadooda ma dhici doonaan.
Si loo helo macluumaadkan, shirkaddu waxay ku tiirsanayd laba nidaam oo lagu ururiyo, lagu kaydiyo, laguna falanqeeyo xogta:
Google Analytics wixii macluumaad ah ee ku saabsan ficilada isticmaaleyaasha ee websaydhka
Shirkadda CRM ee loogu talagalay qiimaha iyo amarka xogta dhameystirka
Suuqa Darjeeling waxay isku darsadeen xogta nidaamyadan, kuwaas oo lahaa qaabab iyo caqli kala duwan. Si loo abuuro warbixin midaysan, Darjeeling wuxuu adeegsaday nidaamka BI ee gorfaynta ilaa dhammaadka.
Adeegsiga Falanqaynta Dhammaadka-Dhamaadka si loo Kordhiyo Soo Celinta Maalgashiga
Xaaladda. Ganacsi wuxuu adeegsadaa dhowr wadiiqooyin xayeysiis ah si uu u soo jiito macaamiisha, oo ay ku jiraan raadinta, xayeysiinta macnaha guud, shabakadaha bulshada, iyo telefishanka. Dhammaantood way ku kala duwan yihiin xagga kharashkooda iyo waxtarkooda.
Hadafka. Ka fogow xayeysiinta aan waxtarka lahayn ee qaaliga ah oo u isticmaal kaliya xayeysiinta wax ku oolka ah oo jaban. Tan waxaa lagu samayn karaa iyadoo la adeegsanayo gorfeyn ilaa dhammaad ah si loo barbardhigo qiimaha kanaal kasta iyo qiimaha uu keeno.
Xalka dhabta ah. GudahaDhakhtarka Ryadom silsilada rugaha caafimaadka, bukaanku waxay kula macaamili karaan dhakhaatiirta wadiiqooyin kala duwan: websaydhka, taleefan, ama soo dhaweynta. Qalabka falanqaynta webka ee caadiga ahi kuma filnayn in lagu go'aamiyo halka booqde kastaa ka yimid, hase yeeshe, maadaama xogta lagu soo ururiyay nidaamyo kala duwan oo aan la xiriirin. Falanqeeyayaasha silsiladdu waxay ahayd inay ku milmaan xogta soo socota hal nidaam:
Macluumaadka ku saabsan habdhaqanka isticmaalaha ee ka socda Google Analytics
Wac wicitaanada nidaamyada raadinta wicitaanka
Xogta ku saabsan kharashyada dhammaan ilaha iidhehyada
Xogta ku saabsan bukaanka, gelitaanka, iyo dakhliga nidaamka gudaha ee rugta caafimaadka
Warbixinnada ku saleysan xogtan wadajirka ah waxay muujiyeen kanaalada aan bixin. Tani waxay ka caawisay silsiladda rugta caafimaadku inay hagaajiso kharashka xayeysiinta. Tusaale ahaan, xayeysiinta macnaha guud leh, suuqleyda waxay kaliya uga tageen ololeyaal leh semantics ka fiican waxayna kordhiyeen miisaaniyadda qalabka geoservices. Natiijo ahaan, Dhakhtarka Ryadom wuxuu kordhiyay ROI ee kanaalada shaqsiyaadka 2.5 jeer wuxuuna yareeyay qarashyada xayeysiinta kala bar.
Adeegsiga Falanqaynta Dhammaad-Dhamaadka si loo Helo Meelaha o F Kobaca
Xaaladda. Kahor intaadan wax hagaajin, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa sida saxda ah aan u shaqeynaynin. Tusaale ahaan, laga yaabee in tirada ololeyaasha iyo weedhaha raadinta ee xayeysiinta macnaha guud ay si dhakhso leh u kordheen oo aysan mar dambe suurtagal ahayn in gacanta lagu maareeyo. Marka waxaad go'aansatay inaad otomatiga u maamusho dalabka. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad fahamto waxtarka mid kasta oo ka mid ah dhowr kun oo oraah oraahda raadinta ah. Si kastaba ha noqotee, qiimeyn khaldan, waxaad kudarsan kartaa miisaaniyadaada lacag la'aan ama soo jiidan kartaa macaamiil yar oo macquul ah.
Hadafka. Qiimee waxqabadka erey kasta oo muhiim ah kumanaan weydiimo raadin ah. In laga takhaluso kharashka luminta iyo helitaanka hooseeya qiimeyn qaldan awgeed.
Xalka dhabta ah. Si otomaatig ah maaraynta dalabka,Hoff, Dukaan dukaamaysiga dukaamaysiga ah ee alaabta guriga iyo alaabada guryaha, oo ku xidhan dhammaan kulamada isticmaalayaasha Tani waxay ka caawisay iyaga inay la socdaan wicitaanada taleefanka, booqashooyinka dukaanka, iyo xiriir kasta oo lala yeesho goobta qalab kasta.
Ka dib markii ay isku milmeen dhammaan xogtan oo ay dejiyeen gorfeyn ilaa dhammaad, shaqaalaha shirkaddu waxay bilaabeen inay hirgeliyaan astaan ​​- qaybinta qiimaha. Sida caadiga ah, Google Analytics waxay isticmaashaa qaabka ugu dambeeya ee aan tooska ahayn ee tilmaamista. Laakiin tani waxay iska indhatireysaa booqashooyinka tooska ah, kanaalka ugu dambeeya iyo fadhiga silsiladda isdhexgalka wuxuu helayaa qiimaha buuxa ee beddelaadda.
Si loo helo xog sax ah, khubarada Hoff waxay dejiyeen sifo ku saleysan masaf. Qiimaha beddelka ee ku jira ayaa loo qaybiyaa inta u dhexeysa dhammaan kanaallada ka qayb qaadanaya tillaabo kasta oo ka mid ah masaska. Markii ay baranayeen xogta isku dhafan, waxay qiimeeyeen faa'iidada eray kasta oo muhiim ah waxayna arkeen kuwa aan waxtar lahayn oo amarro badan keenay.
Falanqeeyayaasha Hoff waxay dejiyeen macluumaadkan si maalinle ah loo cusbooneysiiyo loona wareejiyo nidaamka maareynta dalabka otomaatiga ah. Qiimaha ayaa markaa la hagaajiyaa si cabirkoodu si toos ah ugu dhigmo ROI ee ereyga muhiimka ah. Natiija ahaan, Hoff wuxuu ku kordhiyay ROI xayeysiinta duruufaha ah 17% wuxuuna labanlaabay tirada ereyada muhiimka ah ee wax ku oolka ah.
Adeegsiga Falanqaynta Dhammaad-Dhamaadka ee Shaqsiyeynta Isgaarsiinta
Xaaladda. Ganacsi kasta, waxaa muhiim ah in la dhiso xiriiro lala yeesho macaamiisha si loo sameeyo dalabyo la xiriira isla markaana loola socdo isbeddellada ku saabsan daacadnimada sumadda. Dabcan, marka ay jiraan kumanaan macaamiil ah, waa wax aan macquul aheyn in loo sameeyo dalabyo shaqsiyeed mid kasta oo iyaga ka mid ah. Laakiin waad u kala qaybin kartaa dhowr qaybood waxaadna dhisi kartaa xiriir kasta oo ka mid ah qeybahan.
Hadafka. U kala qaybi dhammaan macaamiisha dhowr qaybood isla markaana dhis xiriir la sameeya qayb kasta oo ka mid ah qaybahan.
Xal wax ku ool ah. ​dukaanka, Suuq weyn Moscow oo leh dukaan internetka ah oo loogu talagalay dharka, kabaha, iyo qalabka, ayaa hagaajiyay shaqadooda macaamiisha. Si loo kordhiyo daacadnimada macaamiisha iyo qiimaha noloshiisa oo dhan, suuqleyda Butik waxay si shaqsi ahaaneed ula xiriiraan xarun wicitaan, emayl, iyo fariimo SMS ah.
Macaamiisha waxaa loo qaybiyay qaybo ku saleysan wax iibsigooda. Natiijadiisu waxay ahayd xog firidhsan maxaa yeelay macaamiisha ayaa ka iibsan kara khadka tooska ah, ka dalban kara khadka tooska ah waxayna ka qaadan karaan alaabada dukaan jireed, ama ma isticmaali karaan goobta gabi ahaanba. Tan awgeed, qayb ka mid ah xogta ayaa la ururiyay oo lagu kaydiyay Google Analytics iyo qaybta kale ee nidaamka CRM.
Ka dib suuqleyda Butik ayaa aqoonsaday macmiil kasta iyo dhammaan wixii ay soo iibsadeen. Iyada oo ku saleysan macluumaadkan, waxay go'aamiyeen qaybo ku habboon: iibsadayaasha cusub, macaamiisha iibsada rubuc mar ama sanadkiiba hal mar, macaamiil caadi ah, iwm. Guud ahaan, waxay aqoonsadeen lix qaybood waxayna sameeyeen sharciyo si otomaatig ah looga beddelayo qayb ka mid ah oo loo wareejinayo qayb kale. Tani waxay u oggolaatay Butik marketers inay dhisaan isgaarsiin shaqsiyeed la leh qayb kasta oo macaamiil ah oo ay tusto farriimo xayeysiis kala duwan
Adeegsiga Falanqaynta Dhammaad-Dhamaadka si loo Go'aansado Khayaanada Xayeysiinta Qiimaha-Wax-qabad kasta (CPA)
Xaaladda. Shirkad waxay u isticmaashaa qaabka kharash-ka-tallaabo ee loogu talagalay xayeysiinta internetka. Waxay meeleeysaa xayeysiis waxayna bixisaa barnaamijyada kaliya haddii booqdayaashu ay qabtaan ficil la bartilmaameedsaday sida booqashada boggooda, diiwaangeliyaan, ama iibsadaan shey. Laakiin wada-hawlgalayaasha sameeya xayeysiiska had iyo jeer si daacad ah uma shaqeeyaan; waxaa ku jira khaa'imiin. Badanaa, khiyaanooyinkaani waxay ku beddelaan isha taraafikada hab sidan oo kale ay u muuqato inay tahay haddii shabakadooda ay horseedday beddelaad. Iyadoo aan lahayn falanqeyn gaar ah oo kuu oggolaaneysa inaad la socoto tallaabo kasta oo ka mid ah silsiladda iibka oo aad aragto meelaha ay saamaynta ku leedahay natiijada, waa wax aan macquul ahayn in la ogaado khayaanadaas oo kale.
Bangiga Raiffeisen wuxuu lahaa arrimo la xiriira khayaanada suuq geynta. Ganacsadayaashoodu waxay ogaadeen in qarashyada raacsan ee taraafikada ay kordheen halka dakhliga uu sidiisii ​​yahay, sidaa darteed waxay go'aansadeen inay si taxaddar leh u hubiyaan shaqada lamaanayaasha.
Hadafka. Soo ogow khayaanada adoo adeegsanaya gorfayn ilaa dhamaadka. Lasoco talaabo kasta oo ka mid ah silsiladaha iibka oo aad fahanto meelaha laga helayo saamaynta ay ku yeelanayso ficilka macaamiisha lala beegsanayo.
Xal wax ku ool ah. Si loo hubiyo shaqada la-hawlgalayaashooda, suuqleyda Bangiga Raiffeisen Bank waxay ka soo ururiyeen xog cayriin falalka isticmaalaha goobta: macluumaad dhammaystiran, aan la soo saarin, iyo mid aan la baarin. Dhamaan macaamiisha leh kanaalka ugu dambeeya ee xulufada, waxay doorteen kuwa lahaa fasaxyo aan caadi aheyn oo udhaxeeya kalfadhiyada. Waxay ogaadeen in xilliyada nasashada, isha taraafikada la beddelay.
Natiija ahaan, falanqeeyayaasha Raiffeisen waxay heleen la-hawlgalayaal dhowr ah oo qoondaynaya taraafikada shisheeyaha oo dib ugu iibinaya bangiga. Markaa way joojiyeen la shaqaynta shuraakadaas waxayna joojiyeen inay ku lumaan miisaaniyadooda.
Waxaan soo bandhignay caqabadaha ugu caansan ee suuqgeynta ee nidaamka gorfeynta dhammaadka-dhamaadka xallin kara. Ficil ahaan, adoo kaashanaya xog isku dhafan oo ku saabsan ficilada isticmaalaha labadaba bogga internetka iyo khadka tooska ah, macluumaadka nidaamyada xayeysiinta, iyo wicitaanka xogta raadinta, waxaad ka heli kartaa jawaabaha su'aalo badan oo ku saabsan sida loo horumariyo ganacsigaaga.
Tags: dhacakharash falkiibadhakhtar ryadomafjaro-to-dhamaadkagorfayn ilaa dhamaadkaowox bi
Margo waa Sarkaalka Madaxa Suuqgeynta ee OWOX BI, oo ah hogaamiye bixiye xalka falanqaynta webka ee bariga Yurub. Waxyaabaha ay shirkaddu soo saarto waxay kuu oggolaanayaan inaad si otomaatig ah u hesho warbixinnada suuqgeynta ee ku saleysan xogta ceyriinka ah, qiimeyso waxtarka kanaal kasta oo suuq-geyn ah, u-habeyn gorfeyn dhammaadka-dhamaadka ah, iyo inaad sameysid go'aanno ganacsi oo ku saleysan xog macquul ah.
5 Istaraatiijiyad oo Lagu Kordhinayo In Badan Oo Iibinta Dugsiga ee 2019